घातक नबनोस् एघार बुँदे सहमति | चितवन पोष्ट
शुक्रबार सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि लामो समयदेखि स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै विखण्डनकारी गतिविधि गर्दै आएका सिके राउत मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको खबरले शान्तिप्रेमी नेपाली जनतामा खुसीको सञ्चार भएको थियो । देश टुक्र्याउने अभियान त्याग्ने घोषणा आफैँमा स्वागतयोग्य कुरा हो । ११ बुँदे सहमतिमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका नेता डा सीके राउतले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, यतिखेर हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरुले अहिले आ–आफ्नै तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्न थालेका छन् । विशेषगरी सहमतिको दोस्रो नम्बरको बुँदालाई लिएर गठबन्धनका नेता डा सीके राउत पक्षधरले खुलेआम मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने पक्षमा जनमतसंग्रहका लागि सरकार तयार भएको भन्दै व्याख्या गर्न थालेका छन् । यतिमात्रै होइन, उनीहरुले शनिबार बेलुकी तराईका विभिन्न जिल्लामा ११ बुँदे सहमतिको खुसीयालीमा दीपावलीसमेत गरेका छन् । स्वतन्त्र मधेसको मुद्दामा सरकारले जनमतसंग्रह गर्न सहमति गरेको भन्दै मधेसमा सडकदेखि व्यानरसम्म ‘फ्री मधेस’ लेखिएका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका छन् । ११ बुँदे सहमतिका एक हस्ताक्षरकर्ता डा सीके राउत स्वयम्ले सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता तस्बिरहरु शेयर गर्नुले थुप्रै आशंका जन्माएका छन् ।
यतिबेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जिम्मेवार नेताहरुले नै सहमतिको दोस्रो नम्बरमा उल्लेखित बुँदाप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । के सरकारले विखण्डनका गतिविधि गर्नका लागि सो समूहलाई अब छुट दिएको हो ? भन्ने सवाल उठिरहेको छ । सरकारी पक्षले दोस्रो नम्बरको बुँदालाई आवधिक निर्वाचनसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालेका छन् । जनअभिमत निर्वाचन हो कि जनमतसंग्रह हो ? यस विषयमा दुवै पक्षले आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थालेका छन् । संविधानमा जनमतसंग्रहको कुरा उल्लेख भएको भन्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले तराईका जिल्लाहरुमा प्रदर्शन गर्दै जनमतसंग्रहको तिथि तोक्न माग गरेका छन् । यस्तो व्याख्याले सरकारसँगको सहमतिअनुसार राउत समूह आफ्ना कार्यकर्ता छुटाएर शक्ति सञ्चय गर्दै पुनः पुरानै बाटोमा फर्किने संकेत देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश उत्पन्न भएको छ । डा राउतले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा ‘फ्री मधेस’ लेखिएका तस्बिरहरु शनिबार र आइतबार सार्वजनिक गर्नुले पनि शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ । शुक्रबार भएको सहमतिमा ‘स्वतन्त्र मधेस’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई मान्यता दिन खोजिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका नेता भीम रावलले नै सार्वजनिक रुपमा कडा आपत्ति जनाइसकेका छन् ।
देशमा द्वन्द्वरत समूहलाई मूलधारमा ल्याएर मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत गराइएको खबर सार्वजनिक भएको चौबिसघन्टा पनि नबित्दै मधेसमा जनमतसंग्रहको थिति तोक्न माग गर्नु ठूलो दुस्साहस हो । यदि सरकार सहमतिमा चिप्लिएकै हो भने त्यो देशकै लागि ठूलो अभिसाप हुनेछ । देश टुक्र्याउने विषय उठान गरेर हिँडेको व्यक्ति र उनका समूहलाई सरकारले प्रोत्साहन होइन, उनीहरुका गतिविधिबारे निरन्तर निगरानी पनि गर्नैपर्छ । राउतले जनमतसंग्रहका लागि सरकार तयार रहेको कुरा प्रचार गरेका छन् । सरकारसँग सहमतिको २ नम्बर बुँदाले पनि सोही कुरालाई संकेत गर्न खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेस र अन्य पार्टीहरुले सरकारसँग प्रष्टीकरण मागेका छन् । सरकारले यस सम्बन्धमा आधिकारिक जवाफ दिँदै समयमै शंका निवारण गर्नुपर्छ । सीके राउतको गतिविधि हेर्दा शंकास्पदमात्रै होइन, सहमति घातक बन्ने त होइन ? भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न हुन थालेको छ । सार्वभौम र अखण्ड राज्यका लागि कुनै पनि समूहका गलत क्रियाकलाप समयमै नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।